Af-Dabarre - Wikipedia
Af-Dabarre amma Af-Ciroole ka mid ma ahan Af-maay ee waa lahjad ka duwan. waana qayb ka mid ah[[Af-Soomaaliga. marka loo eego erayo badan Af-maayga iyo Af-dabbarraha, waxaa xaga ku hadalka iyo micnaha maxaa tiriga u dhow, Af-dabarraha.
Afkan waxaa looga hadlaa meelo ka mid ah Goboladda dalka Soomaaliya sida Jubadda Dhexe, Gobolka Baay, gaar ahaan degmadda Diinsoor iyo qaar ka mid ah deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Lahjadaan Dabarraha marka si xeel dheer dib loogu eego, waa mid ay ku hadli jireen qowmiyadihii hore, inkastoo aan taariikh sidaa u fog oo aan kaga sheekeyn karo haynnin, haddana markaad eegto qaabka loogu hadlayo iyo erayadeeda sida ay u dhisan yihiin, waa mid aad u facweyn oo u baahan baaris cilmiyeed halka ay ka soojeedo. laakiin hadda waxaa ku hadlla beelaha Dabarre iyo Ciroole, waxayna degan yihiin deegaan balaaran oo Goboladda Soomaaliya ka tirsan.
marka laga hadlayo deegaan ahaan beelaha soomaaliyeed sida ay isuraacaan, waxay ka tirsan yihiin beelaha Digil.
Beelaha Digil waa kuwo leh lahjado kala duwan, waxayna intooda badan degan yihiin Goboladda Shabeelaha Hoose, Jubbadda Hoose, Jubbadda Dhexe iyo Degmo ka mid ah Gobolka Baay, sida Diinsoor oo aan kor ku soo sheegney mahadsanidiin
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Af-Dabarre&oldid=142187"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2015, marka ee eheed 12:48.